အငျ်ဂလိပျစာရေးတတျလိုသောျ (၁၈)- ပါမောက်ခမြိုးကြောျမွငျ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » အငျ်ဂလိပျစာရေးတတျလိုသောျ (၁၈)- ပါမောက်ခမြိုးကြောျမွငျ့
အငျ်ဂလိပျစာရေးတတျလိုသောျ (၁၈)- ပါမောက်ခမြိုးကြောျမွငျ့
Posted by kai on Jun 11, 2020 in Contributor, Columnist, Education |0comments
ယခုလက စပြီး အင်္ဂလိပ်စကား ပြောတတ်လာအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။ တကယ်တော့ အင်္ဂလိပ်စကးပြောတတ်ဖို့ မခဲယဉ်းလှပါဘူး။ ရှက်တတ်တဲ့စိတ်ကို ဖျောက်ထားပြီးများများလေ့ကျင့်ပေးဖို့သာလိုပါတယ်။ တချို့က အမှားတွေပြောမိမှာကို ရှက်တယ်တဲ့။ တကယ်က သင်ယူနေတာကြာပြီ၊အမေရိကားရောက်နေတာကြာပြီ၊ အခုထိကောင်းကောင်း မပြောနိုင်သေးတာ နားမလည်နိုင်သေးတာကို ရှက်ရမှာပါ။ ကိုယ့်ဘာသာစကားမှမဟုတ်ဘဲ၊ အနည်းငယ်မှားရင် မှားမှာပါ။ ဂရုစိုက်နေစရာ မလိုပါ။ ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တာကိုပဲ ဂုဏ်ယူရမှာပါ။
ယခုစကားစပြောတတ်ဖို့ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ –
Beginningaconversation ပဲ ဆိုပါစို့ လုပ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ phrases လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အလွတ်ကျက်မှတ်ထားပြီး အခန့်သင့်သလို သုံးနိုင်ပါတယ်။
Hi, You look familiar. Have I seen you before?
Hello! You must be new. I’m ………Glad to know you.
Hey, You must be the new guy. Welcome!
Hi, my name is …….Can I help you?
အထက်က ဖော်ပြပါ Phrases လေးတွေကို လက်တွေက ဟောဒီလို dialog လေးတွေမှာ ထည့်ပြီး သုံးလို့ ရပါတယ်။
You: Hi, you must be new. I don’t think we’ve met.
ခင်ဗျားတို့ ခုမှ ပြောင်းလာတယ်ထင်တယ်။ မတွေ့ဖူးဘူး။
Neighbor: Oh! Yes! We just moved in next door last week.
ဟုတ်ကဲ့။ အရင်တပတ်ကပဲ ပြောင်းလာတာပါ။
Neighbor: From LA.
LA ကပါ ခင်ဗျာ။
You: Well, welcome to the neighborhood. I’m .
လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း ဒီ phrases လေးတွေကို အခန့်သင့်ရင်သင့်သလိုထည့်ပြီး သုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ စကားစတတ်ရင် မိတ်ဆွေတွေလည်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ- dialog လေးကို လေ့လာကြည့်ပါ။
You: Good morning/ You must be the new guy? We’ve been expecting you.
လာပါ၊ လာပါ။ ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်တို့ မျှော်နေကြတာ။
Manager: Oh! Yes/ My name is David McFarland.
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်နာမည်က ဒေးဗစ် မက်ဖာလန် ပါ။
You: Hello /David/ nice to meet you. I am .
တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် ဒေးဗစ်။ ကျွန်တော်က ။
Manager: Nice to meet you.
ဟုတ်ကဲ့၊ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် ခင်ဗျာ။
မိမိလုံးဝမတွေ့ဘူးတဲ့ လူစိမ်းတစ်ယောက်ကို ကျောင်းမှာ ဖြစ်စေ လုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်စေ၊ အပြင် တနေရာရာမှာ ဖြစ်စေ စကားစပြီး ပြောလိုလျှင် small talkကို လေ့ကျင့်ထားရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ သိထားသင့်တဲ့
phrases လေးတွေ ဖော်ပြပါမယ်။
Great weather, isn’t it?
whatalovely day/
I think It’s going to be very warm today.
The buses are running late, aren’t they?
ဖော်ပြပါ phrases လေးတွေကို ယခုလို dialog လေးတွေမှာ ထည့်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။
You: Whatalovely day/
stranger: Yes, it isalovely day, isn’t it?
You: it sure is. Are you from around here?
ဒါထက်၊ ခင်ဗျားက ဒီရပ်ကွက်ကလားဟင်။
နောက်ထပ် Dialog လေးတစ်ခု ဖော်ပြပေးပါဦးမယ်။
You: The buses are running late, aren’t they?
Stranger: They sure are but that’s nothing new around here.
ဟုတ်တယ်၊ဒီမှာတော့ ဒီလို နောက်ကျတတ်တာ ရိုးနေပါပြီ။
You: Really? I wish I had known that earlier.
ဟုတ်လား။ စောစောက ကျွန်တော် သိခဲ့ရင် ကောင်းသား။
Stranger: They are not very reliable. It’s better to takeataxi if you are inahurry.
ဘတ်(စ်) ကားတွေက အချိန်မမှန်တတ်ဘူးဗျ။ လောတယ်ဆိုရင် အငှားကားစီးတာ အကောင်းဆုံးပဲ။
စကားစတတ်ဖို့ လိုသလို ၊စကား ဆုံးတတ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လျှာရှည်သူများနှင့် တွေကသည့်အခါ စကားမဆုံးတတ်ရင် အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းပါလမ့်မယ်။ ဒီတော့ ဖော်ပြပါ prases လေးတွေကို
Well, great talking to you, but I have to go. See you soon.
Wow/ Look at the time. I’m sorry, but I have to leave.
Oh no! It’s getting late. I have to go. I’ll see you around.
I’m afraid, I have to go. It was great metting you.
အချို့လူများကို တွေ့ဖူးပါလိမ့်မည်။ စကားပြောသည့်အခါ ၎င်း တစ်ယောက်ထည်းက conversation ကို အနိုင်စီးပြီး တဖက်သားကို လုံးဝပြောခွင့် မပေးတာမျိုး ကြုံဘူးပါလိမ့်မည်။ တခါတရံ metting တွေမှာ တစ်
ယောက်ပြီး တယောက် စကားပြောနေကြရာ၊ မိမိမှာ နုတ်ပိတ်ပြိီး စကားမတတ်လို့ နားထောင်ရသူ လုံးလုံး ဖြစ်နေရတာမျိုးလည်း ကြုံကြဘူးပါလိမ့်မည်။ ဒီတော့ Interruption လို့ခေါ်တဲ့ စကားဖြတ်ပြီး ပြောလိုတဲ့အခါ
သုံးရမည့် phrases လေးများကို ကျက်မှတ်ထား ဖို့လိုပါသည်။ ဒီလိုစကားလေးများ သိထားမှ မိမိပြောလိုတာလေးတွေကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး စကားဖြတ်ပြီးပြောနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ မသုံးတတ်လျှင် ရိုင်းပြသလိုဖြစ်နိုင်
Do you mind if I interject something here?
Excuse me, can I say something, please.
ဒီလို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလေး စကားဖြတ်ပေးလိုက်ရင်တော့ လျှာရှည်သူများ စိတ်မဆိုးနိုင်တော့ပါ။ မိမိကို တလှည့် ပြောခွင့်ပေးပါလိမ်မည်။ Conversation ဆိုတာ မိမိက စရမှာပါ။ မိမိက အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်သူဆိုတော့ မိမိက စပြီး နုတ်ဆက်မှ၊ ပြောမှဖြစ်မှာပါ။ ဒီတာ့ COVID19 ကြောင့် အိမ်တွင်းပုန်းနေချိန်မှာ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး converse လုပ်ကြည့်ပါ။ practice makes perfect ဆိုသလို တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ နောက်လမှ နောက်ထပ် လေးတွေ ဖော်ပြပေးပါဦးမယ်။